Sajhasabal.com |चीनमा काम गर्न जान साढे ३ हजारले लिए ‘सीमा पास’, मासिक कति कमाई हुन्छ ?
नेपाल छाड्दै सुजाता ?
अमेरिकासँग साझेदारीका महत्वपूर्ण सवै पक्षमा छलफल भयो : मोदी
चीनमा काम गर्न जान साढे ३ हजारले लिए ‘सीमा पास’, मासिक कति कमाई हुन्छ ?
भदौ २४, हुम्ला | छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनमा काम गर्न जानका लागि तीन हजार ५०० हुम्लीले सीमा पास बनाएका छन् । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ताक्लाकोट जोड्ने हिल्सा नाका खुलेपछि कामको खोजीका लागि वैशाखदेखि उनीहरुले नयाँ सीमा पास नवीकरण गरेको जिल्ला प्रशासन हुम्लाले जनाएको छ ।
यो नाका हिमपातका कारण वर्षमा छ महीना मात्र खुल्ने गर्छ भने जाडोका कारण मङ्सिरदेखि बन्द भई जेठदेखि पुनः हिल्सा नाका खुल्छ । अहिले कामको खोजी, व्यापार, दशैँका लागि लत्ताकपडा लिन जानेहरु दैनिक सीमा पास लिन आउने गरेको सहायक प्रजिअ महेशकुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
छिमेकी राष्ट्रचीनमा कामको खोजीमा हुम्लाको सबैभन्दा बढी सिमकोट गाउँपालिकाका युवा ताक्लाकोट पुगेका छन् । जिल्लाका अन्य सर्केगाड गाउँपालिका र नाम्खा गाउँपालिकाका युवाले पनि जिल्ला प्रशासनबाट सीमा पास बढी बनाएका सहायक प्रजिअ पोखरेलले बताउनुभयो ।
हुम्ली कामदार चीनको पुराङ्ग काउन्टीमा निर्माणसम्बन्धी, घरेलु कामदारका रुपमा त्यसतर्फ जाने गरेको सिमकोट गाउँपालिका–२ निवासी उपेश भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । हिल्सा नाका हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ताक्लाकोटमा रोजगारीका लागि यहाँका युवा जाने गरेका छन् । केही समय अगाडि चिनियाँ सरकारले हुम्ली कामदारको सीमा पास खोसेर फिर्ता पठाएता थियो । तर पछि चीनको ताक्लाकोटमा तीस किलोमिटरभन्दा टाढा जान नदिने सहमतिमा हुम्ली कामदारले काम गरिरहेको ताक्लाकोटमा पुगेका भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । हुम्लाका नागरीकले बर्सेनि यसरी नै रोजगारीका लागि चीनको ताक्लाकोटमा कामदारका रुपमा जाने गर्छन् ।
हुम्लाबाट ताक्लाकोट पुगेका कामदारले यतिबेला ताक्लाकोटमा १०० देखि १८० सम्म चिनियाँ युवान कमाउने गरेको ताक्लाकोटमा काम गरिरहेका उजिर बोहराले जानकारी दिनुभयो । कामदारका रूपमा बर्खायाममा ताक्लाकोट र यसका आसपासका बस्तीमा गई हुम्लीले मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । हरेक वर्ष हुम्ली कामदार चीनको पुराङ काउन्टीमा गएर कामदारका रूपमा मासिक ३० देखि ७० हजार नेपाली रुपैयाँ कमाउने गर्छन् ।
ताक्लाकोट हुम्ला जिल्लाको हरेक सामान आयात र निर्यात गर्ने एक मुख्य स्थलका रूपमा परिचित हुँदै आएको छ । हिल्सा नाका हुँदै हरेक वर्ष नेपाली कामदार त्यस ठाउँमा पुग्ने गरेका छन् । हुम्लाबाट जडीबुटी, काठ, हस्तकलाका सामग्री चीनको ताक्लाकोट हुँदै निर्यात हुने गरेको छ भने नेपालीले दैनिक उपभाोग्यको सामान, लत्ताकपडा, निर्माणसम्बन्धी सामग्री आयात गर्ने गरेका छन् ।
हुम्लीले मैदा, खाद्यपदार्थ लगायतका सामग्री मनग्य आयात गर्दै आएका छन् । धेरै पहिले कमाईका लागि भारत जाने गरेका हुम्लीका लागि केही वर्षअगाडि देखि चीन प्रमुख आयस्रोत स्थल बन्दै गएको छ । गत वर्ष ताक्लाकोटमा काम गरेबापत प्रतिव्यक्ति १०० देखि २५० चिनियाँ युवान दिएपछि यस वर्ष कामका लागि ताक्लाकोट जाने बेरोजगार हुम्लीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हुन सक्ने जिल्ला प्रशासन हुम्लाले जनाएको छ ।
हुम्लाका अन्य गाउँपालिकाभन्दा उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाका गाउँ लिमिका तिल, हल्जी र जाङ्ग तिनै गाउँबाट पशुवस्तु चराउने गोठालाबाहेक घरका सबै सदस्य कामका लागि ताक्लाकोट जाने गर्छन् । गएका वर्षभन्दा यो वर्ष ताक्लाकोटमा काम गर्न जाने कामदारको सङ्ख्या बढे तापनि विगतका वर्षमा जसरी काम पाउन सहज नभएको बताउने गरेको केही दिनअगाडि केरुङ हुँदै ताक्लाकोटबाट सिमकोट पुगेका नेपाल खाद्य संस्थान हुम्ला शाखाका प्रमुख रावबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो । पहिला काम पाउन पनि सजिलो हुने र काम गरेबापत काम हेरेर राम्रो आम्दानी हुने भए तापनि यो वर्ष कम ज्याला र कुनै दिन यतिकै बसिरहनुपर्ने अवस्था छ । रासस